Ogaden News Agency (ONA) – Wacdarihii ka dhacay Minnesota kama sheekayn karo qof aan goobjoog ahayn
Wacdarihii ka dhacay Minnesota kama sheekayn karo qof aan goobjoog ahayn
Posted by ONA Admin	/ July 17, 2011
Riwaayadii loogu magacdaray “Qabkii Beenta ahaa haku Quusto Gumetyste” ayaa lagu daawaday habeenkii Sabtida ahayd masraxa weyn ee Mineapolis Convention Center. Riwaayaddan oo Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardeyda Ogadeniya ee Gobolka Minnesota ay soo diyaariyeen ayaa waxaa kaalin lixaad leh ka qaatey Maamulka Jaaliyada Ogadeniya ee Minnesota.
Riyaawaydan oo ahayd mid aad u qiimi badan ayaa waxaa si aad ah uga soo qaybgaley shacabweynaha Ogadeniya ee Gobolka Minnesota iyo guud ahaan dadweynaha Soomaliyeed oo buuxiyey goobtii Riwaayada loogu talagaley. Dadka qaar ayaa waxay ka soo safreen Gobolo ka fog Minnesota, sida Mossuri iyo Nebreska.
Dhalinyarada Jileysay Riwaayadan ayaa waxay ahaayeen dhalinyaro aad u da’yar oo inkastoo aanay dhamaantood fanka horey uga soo qaybgelin hadana aad moodaysay in ay yihiin jilayaal ruug cadaa ah marka aad eegto qaabka ay wax u jilayaan iyo murtida Riwaayadan xambaarsantahay. Dhalinyarada ayaad dhamaantood ka dareemaysay in ay ka muuqato qiiro wadanimo iyo shucuur dheeraad ah, marka aad u fiirsato qaabka uu mid kastaa u matalayo kaalinta Riwaayada kagaga aadan, iyaga oo soo xasuusanaya waxyaabo badan oo ay markhaati ka ahaayeeen intii aysan ka soo haajirin dhulkoodii hooyo ama waxyaabo ay kula kulmeen qurbaha. Sida dhalinyarada daadka raacdey ee dhaqan doorsoonku ku dhacey iyo kuwa ku sifoobey Dabaqoodhinimada Doolka ah.
Dadweynihii ka soo qayb galay Riwaayada ayaa iyagu goobta ka muujiyey wacdaro iyo qiiro wadanimo. Inta badan waxaad arkeysaa iyada oo dadweynuhuu isku darayaan sawaxan, sacab iyo istaagid aan kala joogsi lahayn.
Riwaayadan ayaa waxaa ku jirey heeso, dhaantooyin iyo geeraaro qiiro galiyey dadwynihii ka soo qayb galay.
Dhinaca kale, jilayaasha Riwaayada ayaa waxaa ka mid ahaa Gabadh lagu magacaabo Xaliimo Gobaad iyo Wiil lagu magacaabo Maxamed Good oo iyagu ka soo kicintey cariga Ingiriika si ay uga qayb qaaataan dhigista Riwaayada. Wiilkan iyo Gabadhan oo ka mid ah dhalinta Cariga Ingiriiska ee wadanka UK ayaa markii xidhiidhiyaha Riwaayadu ku soo dhaweeyey magacadoodo ay dadweynihii Goobta fadhiyey isku dareen saxab aan kala joogsi lahayn iyo istaagid ay ku soo dhaweynayaan Xaliimo Gobaad iyo Maxamed Good.
Sidoo kale, waaxaa Riwaayada Marti sharaf ku ahaa Fanaanada Qaranka Soomaaliyeed ee Fartuun Birimo oo ka soo safartey Dalka Canada. Fartuun Birimo ayaa markii ay masraxa soo istagatey waxay dadweynihii isku dareen sacab iyo istaagid lagu soo dhaweynayo Fanaanadan Soomaaliyeed. Faruuun Birimo ayaa xalay goobta ka dhigtey wacdaro soo jiitey ka soo qayb galayaashii Riwaayada, iayada oo qaatey Dhaantooyin iyo heeso isagu jira jaceyl iyo Wadani.
Dhankasta marka laga eego munaasabadan xalay ka dhacday Gobolka Minnesota ayaa ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay jawi aad u qurxoona ku dhamaatay.
Qoraal laguma soo koobi karo wacdarihii ay xalay soo bandhigeen Ururka Midowga Ardeyda Ogadeniya ee “Xidigaha Minnesota”.
Si kastaba ha ahaatee, da’yarta qurbaha ku nool ee Ogadeniya ayaa beryahan bilaabey Riwaayado ay dadka ku abaabulayaan, waxaana sanadahan socda mawjad xoog badan iyo kacdoon ay wadaan dhalinyarada Qurbaha. Kuwaas oo wada abaabulo dhiinacyo badan taabanaya, sida Riwaayadaha, ka qayb galka shirararka Caalamiga ah e ee lagu gorfeeyo Geeska Afrika iyo tababaro ay iyaga dhexdoodu isu fidiyaan.
Waxaan maalmaha soo socda soo badhigi doonaa Wareysiyo kooban oo aan ka qabaney qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha Riwaayada iyo Qabanqaabiyaayaasha oo maqal iyo muuqaal ah.